ဝီကီပီးဒီးယား:အကူအညီစားပွဲ/မြန်မာစာအကူအညီ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၂ မြန်မာစာ မှန်ကန်စွာ မမြင်ရခြင်း
windows 10 မှာ မြန်မာစာရိုက်၍ ရအောင် အကူအညီတောင်းခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဒီကနေ့ windows 10 စသုံးတာ firefox setting မှာ font တွေကို myanmar3ပြောင်းထားပါတယ်။ ဝီကီက စာတွေအမှန်အတိုင်းလဲ မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် keyboard မှာ မြန်မာစာ ရွေးထားပေမယ့် စာရိုက်ရင် myanmar3လက်ကွက်လို မပေါ်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ shift +fနှိပ်ရင်္္ ပေါ်ရမယ့်အစား်် ပေါ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကူညီပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၁၅:၀၁၊ ၂၉ မတ် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဝင်းဒိုးမှာ နဂိုပါတဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ကို သုံးတာလား။ ဒါမှမဟုတ် third party ကီးဘုတ်တင်ပြီး သုံးနေတာလား။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၀၄၊ ၃၀ မတ် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဝင်းဒိုး ၁၀ မူရင်းပါ စနစ်က ယူနီကုဒ်စနစ်ပါပဲ အခက်အခဲကတော့ ကီးဘုတ်အသုံးပြု မှုပါပဲ၊ ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာကို လေ့လာပေးပါ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သဝေထိုးရှေ့ရိုက်နှင့် နောက်ရိုက်အနည်းငယ်အပြင် အခြားအက္ခရာများ အထားအသိုအနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။ သူထွန်း (ဆွေးနွေး) ၀၆:၂၁၊ ၁ မတ် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ယူနီကုတ္﻿﻿နဲ႔ ဖတ္﻿﻿မရလို႔ ရ﻿﻿ေအာင္﻿﻿ဘယ္﻿﻿လို﻿﻿ေျပာင္﻿﻿းလဲ သိခ်င္﻿﻿ပါတယ္﻿﻿ခင္﻿﻿ဗ်ာ ﻿ေဇာ္﻿ဂ်ီ ﻿﻿ေဖာင္﻿﻿့လည္﻿﻿းရွာမ﻿﻿ေတြ႕လို႔ပါခင္﻿﻿ဗ်ာ-- 37.111.3.25 ၀၉:၄၈၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
You need to use Unicode font to read and write in Myanmar Wikipedia. To know more detail, feel free to message me. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၁:၄၂၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
You all need to use Unicode system to read and write in Myanmar Wikipedia. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၂၂၊ ၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
All of Mr, you should be use Unicode system, zawgyi font is can't read and write in wikipedia myanmar. သူထွန်း (ဆွေးနွေး) ၀၆:၁၇၊ ၁ မတ် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
You need to use Unicode font to read and write in Myanmar Wikipedia. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၁၀၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Zawgyi font is not used in Myanmar Wikipedia. You need to use Myanmar Unicode to read and write on Myanmar Wikipedia. Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၄၀၊ ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
If we use Zawgyi font, there will be some technical problems in processing, searching, linking etc. For more information please see Wikipedia:Font. Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၁၅၊ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
myanmar font inpudအဆင္မေျပ[ပြင်ဆင်ရန်]
Please try to use with Desktop mode via browser. Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၇၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ျမန္မာစာ မမွန္ ။အမွန္ ျပင္ရန္[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖုန္း gmail apk တြင္ျမန္မာစာမမွန္ျခင္း[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားက ယူနီကုဒ်စနစ်ကို သုံးထားတဲ့အတွက် ယူနီကုဒ်ဖောင့်မဟုတ်တာကို သုံးမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ ယူနီကုဒ်သုံးကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၀၁၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ယူနီကုဒ်ပြောင်းပြီး သုံးကြည့်ပေးပါဗျ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၅၉၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အခု ရေးထားတာတော့ ယူနီကုဒ်အတိုင်း မှန်နေပါတယ်ဗျ။ အပေါ်က ပြောထားတာတွေက ဇော်ဂျီနဲ့ အကူအညီတောင်းနေကြတာမို့ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၅၉၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျွန်တော် အသင်္ခတ လုလင်ပျိုသည် ပုံတင်၍မရပါ စာများရေသားလျှင်လည်း အခြားသူများရေးပြီးသားနေရာ၌သာ ဖြည့်စွက်ရေးသလို ရေးနေရပါသည်။ မိမိကိုင်ပိုင် စာမျက်နှာ။ ဖန်တီချင်ပါသည် ကူညီပေးပါဦး ဝီ လူကြီးများခင်ဗျ
အကြောင်းအရာသစ် ရေးချင်ရင် Search ဝီကီပီးဒီးယား မှာ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ မရှိသေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆို Search list ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အနီရောင်နဲ့ link ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ Htoo Ra Aung (ဆွေးနွေး) ၀၇:၁၅၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရကောက်နဲ့က မှန်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံများကို https://my.wiktionary.org မှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၁၇၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အသုံးပြုတဲ့ စက်မှာ ယူနီကုဒ် ရှိနေမှ ဖတ်ရှုရ လွယ်ကူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းဖို့ အခက်အခဲရှိနေရင် စာမျက်နှာအောက်ဆုံးနားက "စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ" သို့မဟုတ် "Desktop mode" ကို နှိပ်ပြီး ပြောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၅၂၊ ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thet Ei mon[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာစာ မှန်ကန်စွာ မမြင်ရခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
စာများဖတ်ရှု့သည့်အခါ မှန်ကန်စွာ ဖတ်ရှု၍ အဆင်ပြေစေရန် အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါငည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ — 37.111.3.191 (ဆွေးနွေး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 07:30, 23 April 2020
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:အကူအညီစားပွဲ/မြန်မာစာအကူအညီ&oldid=622585" မှ ရယူရန်